Izindaba - Imiklomelo ye-BXL Creative Won 4 Packaging Design Awards kulo Mncintiswano Wezindondo Wokukhangisa weMobius
Imiklomelo ye-BXL Creative Won 4 Packaging Design Awards kulo Mncintiswano weMobius Advertising Awards
I-BXL Creative iwine i- "Best Works Award" kanye ne "Gold" emithathu yokuklama ukupakisha emncintiswaneni wama-2018 Mobius Advertising Awards, okubeka irekhodi elihamba phambili eminyakeni engama-20 eChina. Kuphela futhi ibhizinisi eliwina imiklomelo e-Asia.
Umqondo walo mklamo uvela ezakhiweni ezihlobene nempilo. Ukupakisha kwangaphandle kuveze ukwakheka kwesakhiwo ngamaphuzu amabili. Okokuqala, i-Huanghe Lou inesici sayo esihlukile. Okwesibili, kunesisho sesiShayina esithi "Impilo ifana nokukhuphuka izitebhisi zesakhiwo". Iphansi elihlukile linombono ohlukile. Abaqambi baphula umhlangano bese benza uphawu olubonakalayo oluhle kakhulu esikhundleni sokuzitika ngemininingwane. Lo mklamo ulula kepha awulula futhi muhle futhi uyamangaza ngezinto zasendulo. Igama lomkhiqizo walo linikeza namakhasimende umcabango omuhle.
Kuze kube namuhla, siphumelele ingqikithi yemiklomelo yokwakhiwa kwamazwe angama-73. Kusithathe isikhathi eside ukuma ezingeni lomhlaba. Njengoba iChina iya ngokuya iba namandla ngokwengeziwe, imakethe yaseShayina iya ngokuya ibaluleka kakhulu kwimikhiqizo ethe xaxa phesheya kwezilwandle, izakhi zamasiko amaShayina zamukelwa futhi zathandwa ngabantu abaningi emhlabeni. Ngenhloso yokuletha izakhi zesiko lamaShayina esigabeni sokuklanywa komhlaba, iBXL Creative isendleleni futhi izohlala isendleleni.
Langaphambilini Ukulwa ne-Covid-19, i-BXL Creative iyasebenza!
Olandelayo: I-BXL Creative Packaging Guizhou Factory Isayinwe ngokusemthethweni!